Mmanụ dị mkpa maka njigide mmiri - mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
Ihe na August 4, 2020 August 4, 2020 by Aromaeasy
Ihe nzipu ozi a bu ntuzi aka n’inwe mmanu di nkpa maka ndozi okike nke ejigide mmiri
Onwere ọtụtụ ihe nwere ike ibute idobe mmiri. Mmiri mejuputara aru mmadu tumadi mmiri. Uffdị nkọ na ọzịza, bloating na ahụ erughị ala na-akọwa njigide mmiri. Anyị nwere ike idozi esemokwu a site n'okike, na mmanụ ndị dị mkpa maka njigide mmiri? Olee mmanụ ndị dị mma maka ibelata njigide mmiri?
Guo, ka ichoputa azịza nke edemede a.
Kedu ihe na-akpata njigide mmiri?
Idote mmiri bụ ihe metụtara ahụike a na-ahụkarị kwa ụbọchị. Ọtụtụ ihe nwere ike ime ka njigide mmiri gụnyere:
Igwe ikuku na-agbanwe
Mgbe ndị mmadụ na-efe n'ụgbọelu, mgbanwe na nrụgide ụlọ nwere ike ime ka ahụ gị jigide mmiri
Iguzo ma ọ bụ ịnọdụ ọdụ ogologo
Ike ndọda na-eme ka ọbara dị n’agbata gị dị nta, na-eme ka njigide mmiri. Ọ dị mkpa ibili ma gagharịa mgbe ụfọdụ iji mee ka ọbara na-ekesa.
Oge nsọ na-agbanwe na homonụ na-agbanwe agbanwe
Womenmụ nwanyị nọ n'oge nsọ na ịtụrụ ime nwere ike inweta mmiri n'ihi ngbanwe nke homonụ na-agbanwe.
Nri nwere sodium nke ukwuu
Inweta sodium nke ukwuu site na itinye nri n’usoro na ihe ọ andụ softụ dị nro nwere ike ime ka njigide mmiri.
Medicationsfọdụ ọgwụ nwere njide mmiri ka ọ bụrụ nsonaazụ ya
Ọgwụ ndị a gụnyere ọgwụ mgbu, ọgwụ mgbali ọbara, ọgwụ mgbochi.
Nke a abụghị ndepụta zuru oke.
Mgbe enwere ụfọdụ nsi n'ime ahụ mmadụ, ahụ nwere ike ịnwe nnukwu mmiri iji kpochapụ ya. Ahụ mmadụ na-echekwa mmiri maka ịwụpụ nsí na sistem. Enwere ike imecha usoro a site na anụahụ ma ọ bụ mmamịrị. Usoro ngbanwe a bụ ebe mmanụ dị oke mkpa maka ọzịza na ijigide mmiri nwere ike inye aka.
Kedụ ka mmanụ mmanụ Dị Mkpa Pụrụ Isi Nye Aka N’idebe Mmiri
Ewepụtara ya na osisi dị oke ọnụ ahịa, mmanụ dị mkpa bụ ihe gbasara osisi. Site na profaịlụ kemịkalụ gbara ọkpụrụkpụ, mmanụ dị mkpa jupụtara na mpaghara na-arụ ọrụ ma dị irè.
Oilsfọdụ mmanụ dị mkpa enwetala ọgwụ mgbochi, ọgwụ nje, na ọgwụ mgbochi. Oilsfọdụ mmanụ dị mkpa na-enwe antiseptik, antioxidant, na-eme ka obi dị jụụ, ma na-eme ka ahụ belata.
Mana nke kachasị mkpa, enwere mmanụ dị mkpa nke nwere akụrụngwa diuretic. Ha bụ ihe mkpali dị ukwuu ma nwee ike inye aka belata ahụ na anụahụ. Omume ndị a niile na-eme ka mmanụ dị mma dị mma maka ezigbo ụzọ dị mma iji belata njigide mmiri.
Osisi kachasị mma maka njigide mmiri
Chamomile Mkpa mmanye maka njigide mmiri
Chamomile bụ otu n'ime mmanụ kachasị dị mkpa maka ụdị akpụkpọ ahụ dị iche iche ebe ọ na-enye ọtụtụ uru anụahụ. A nabatara ya nke ọma maka njirimara mgbochi ya nke na-eme ka mmanụ a dị mma maka mmezi nke njigide mmiri.
Ya mere, chamomile mkpa mmanụ na-arụkwa ọrụ dị ka ezigbo ọgwụgwọ maka nsogbu akpụkpọ ahụ kpatara njigide mmiri. Ọ na - enyekwa aka maka ahụ mgbu na enyemaka isi ọwụwa.
Anyị na-egbute chamomile obere oge mgbe anyị tochara si na ugbo na Hungary, weputa mmanu di nkpa site na mmiri ikuku.
Uru nke mmanụ mmanụ mmanụ dị mkpa maka Chamomile
Mmanụ Chamomile na-enyere aka belata ọzịza, ihe mgbaàmà nke njigide mmiri.
Ọ na - enyere aka belata nchegbu na nkụda mmụọ.
Chamomile na - enyere aka iwepụ nsí na ahụ gị.
Chamomile mmanụ dị mkpa na-enyere aka kwado usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Lavender Mkpa mmanụ maka njigide mmiri
Nyefee mmanụ dị mkpa bụ ngwa ọzọ dị mma maka isi ísì ya na akụrụngwa mgbake maka nsogbu anụ ahụ dị iche iche.
Enwere ike iji nwatakịrị chebe ya, a ga-eji lavender mee ihe maka nlekọta ụmụaka.
Osisi ahụ dị mkpa na mmanụ ahụ nwere ihe ndị na - egbochi ọrịa na ọgwụ antiseptik. Yabụ ọ nwere ike inye aka dozie nsogbu ọsụsọ na isi iyi nke na - egbochi mmiri.
Uru nke mmanụ lavender dị mkpa maka njigide mmiri
Mmanụ lavender na-egbochi ọzịza na isi iyi nke ejidere mmiri.
Ejiri ya na ọgwụgwọ maka nchegbu, nsogbu ihi ụra, yana iwe.
Mepụta mmanụ dị mkpa na-enyere aka belata ọzịza na -akasị afọ ojuju.
Ọ na - enyere aka ịkwalite mgbake anụ ahụ.
Tii Osisi Mkpa mmanụ dị mkpa maka njigide mmiri
Ngwá ọrụ ọzọ dị ike iji belata njigide mmiri bụ osisi tii dị mkpa mmanụ n'ihi akụrụngwa ọgwụgwọ ya.
Osisi tii nwere ihe mgbochi nke na - enyere aka belata afụ ọnụ sitere na njigide mmiri. Ọtụtụ mmadụ na-etinye mmanụ tii dị mkpa na ọgwụ, ọgwụ ntecha, na ngwaahịa ụlọ.
Aha osisi ahịhịa Tea Tree bụ Melaleuca Alternifolia. Anyị si na mmanụ tii dị mkpa mmanụ si na ugbo na New South Wales. Mmanụ tii dị mkpa nwere àgwà ndị ọzọ gụnyere ọgwụ nje, ọgwụ mgbochi ọrịa, na ọgwụ mgbochi ọrịa.
Abamuru nke osisi Tii dị Mkpa mmanụ maka njigide mmiri
mmanụ dị mma kachasị mkpa iji kwụsị ị smokingụ sịga
Mmanụ nke tii na-enyere aka belata mbufụt, ihe bụ isi na-eme ka njigide mmiri. Ọ na - enyere aka ịgbanye usoro ọgwụgwọ ọnya ngwa ngwa site na ịkwalite mgbasa ọbara.
Mmanụ Tea dị mkpa mmanụ na-enyere aka na ndozi nke njigide mmiri na dandruff.
Ọ na - eme ka ihe ndị na - alụso ọrịa ọgụ kwụsị ọrụ ma na - enyere ndị mmadụ ọgụ megide ọrịa.
Mara: Etinyela mmanụ tii dị mkpa.
Mmanụ Mkpokọta Cypress
Osisi mmanụ dị mkpa nke cypress na-arụ ọrụ dịka ọgwụgwọ anụ ahụ maka ọwara carpal, nke na-akpali mbufụt na ọzịza N'ihi ya, mmanụ a na-enyere aka belata njigide mmiri ma belata mbufụt.
Mmanụ dị mkpa nke cypress dị mma maka cellulite, yabụ, ọ bụ ihe ọzọ iji mee ka njigide mmiri kwụsịlata. Ngwongwo ọnya ya na - enyere aka iwepu nsí n’ahụ gị. N'inwe isi na-agba mmiri, mmanụ dị mkpa nke cypress nwere ike inye aka belata nchekasị na mmetụta na-enye ume ọhụrụ ma na-asachapụ.
Uru Uru mmanụ Mkpa Mgbaze
Njirimara ya nke antibacterial na ọgwụ mgbochi ya na-enyere aka ịkwalite usoro ọgwụgwọ ọnya. Mmanụ dị mkpa nke Cypress na-egbochi ụdị ọrịa dị iche iche.
Ọ nwere ike ịkwalite detoxication n'ime ahụ.
Mmanụ si na cypas na - eme ka ihe mgbu na mmiri ọzịza na - ejide mmiri.
Mmanụ Geranium Dị Mkpa Maka Ndobe Mmiri
Geranium dị mkpa bụ nnukwu ngwaọrụ iji dozie njigide mmiri. Site na njikwa mgbochi, mmanụ geranium na-egbochi ụkwụ na ụkwụ ọzịza nke na-ejide mmiri.
Ka ị na-ebelata edema, mmanụ geranium dị mkpa na-enyekwa aka belata oke mmiri n'ime ahụ.
Ọtụtụ mmadụ na-eji mmanụ geranium dị mkpa na aromatherapy iji nweta ahụike dị iche iche. Mmanụ geranium dị mkpa nwere ọtụtụ ihe dịka antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory, astringent, na antimicrobial. Akụkụ kachasị mma nke mmanụ a dị mkpa bụ na ọ na-esite ike na-akpasu iwe; Ọ dị mma nye ọtụtụ ndị.
Uru nke Geranium maka Mchebe Mmiri
Mmanụ Geranium na-egbochi njigide mmiri, gbochie ọzịza, belata edema.
Ọ na - enyere aka igbochi ọrịa nje, ihe na - akpata mbufụt.
Mmanụ Geranium dị mkpa nwere ike igbochi ma belata mmeghachi omume nfụkasị.
Wintergreen Mkpa mmanu
N'ike ụtọ ya, mmanụ dị mkpa oyi nke oge oyi bụ nnukwu ọgwụgwọ maka njigide mmiri.
Na aromatherapy, ndị mmadụ na-etinye Wintergreen iji melite mgbasa ọbara na usoro nri. Mmanụ a dị mkpa na-enye aka ịkwalite ngbanwe nke anụ ahụ, na iji belata mbufụt, mgbu, na ọrịa.
A na-eji mmanụ dị mkpa wintergreen eme ihe n'ụzọ dị ukwuu iji belata ụdị mgbu dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, Wintergreen na-enyere aka belata nkụda mmụọ, nkwonkwo nkwonkwo, ahụ erughị ala, nsogbu ahụ. Ọ bụ nkwado zuru oke maka idozi nsogbu ahụike dị iche iche gụnyere njigide mmiri.
Uru Nweta Mkpa Mgbaasị wintergreen
Wintergreen dị mkpa mmanụ belata ihe mgbu na ọzịza. Mmanụ a dị mkpa na-emekwa ka ọrụ metabolic, usoro nri, na ikesa ọbara.
Mmanụ ndị dị mkpa bụ ọgwụ ọzọ dị mma ma dị mma maka iwepu njigide mmiri. Na ọtụtụ oge, mmanụ dị mkpa anaghị enwekarị nsonaazụ ma ọ bụrụ na etinyere ya nke ọma.
Ntọala a bụ ụkpụrụ gị maka ịhọrọ mmanụ dị mma maka ọgwụgwọ dị mma nke nsogbu idobere mmiri gị. Enwere m olileanya na ị ga-ahụ na edemede a bara uru.
Ọ bụrụ na ịchọta onye bara uru nye gị na listi ahụ n'ime mmanụ 6 kachasị mkpa maka njigide mmiri, gwa anyị na nkwupụta.
Nweta ọdịnaya di uku
►► Soro Aroma na-aga [Instagram]
Dị ka anyị [Facebook]